उषालाई एक पटक जुरक्क उठाएर काखमा मिलाएर राख्यो – भाग १ - Wonder Ideas
उषालाई एक पटक जुरक्क उठाएर काखमा मिलाएर राख्यो – भाग १
दश वर्षअघि काठमाडौं अहिले जस्तो व्यस्त थिएन। माइक्रोबस त आएकै थिएन, ट्रली बसहरु चल्थे, साझा बसले सेवा दिइरहेको थियो। दिउँसो सीमित ठाउँहरुमा पुग्ने गरी विक्रम टेम्पो चल्थ्यो, डल्ले पेट्रोल टेम्पो पनि थियो– मध्यम आय हुनेहरुको ट्याक्सी। मिटरमा चल्थ्यो। राति साढे आठ बजेपछि बस, टेम्पोहरु चल्दैन थिए। रात्रि जीवन त थियो, तर धनीमानीको मात्र। ट्याक्सी स्ट्यान्डमा थोरैमात्र
ट्याक्सी हुन्थे। ९ बजेपछि ती पनि ग्यारेजमा जान हतार गर्थेअजय, पढाईसँगै रोजगारीका लागि काठमाडौं आएको ३ वर्ष बितिसकेको थियो। पश्चिम नेपालमा माओवादीको जगजगी थियो तर देशको राजधानी भएकाले काठमाडौं सुरक्षित नै थियो। ऊ न्यूरोडको एक कलरल्याबमा दिउँसो एकाउन्टेन्टको काम गर्थ्यो भने बिहान मीनभवन क्याम्पसमा पढ्थ्यो।मंसिर महिना लागिसकेको थियो। काठमाडौंमा असोजदेखि नै जाडो सुरु हुन्छ, मंसिरमा जाडो बढ्न थालिसकेको हुन्छ। अझ त्यो दिन किन हो कुन्नी दिउँसैदेखि सिमसिमे झरी परिरहेको थियो।“आज त मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ यार” सँगै काम गर्ने साथी मदनकृष्णले भन्यो।“पख न साँझमा सरसँग अलिकति खर्च मागुमला नि” उसले जवाफ फर्कायो।बिहेको मौसममा कलर ल्याबहरुलाई भ्याइ नभ्याई हुन्छ। मोहनकृष्ण फोटोग्राफर पनि हो, ऊ ल्याबको काम पनि गर्छ।
साहू दिलदार छन्, उनले यसैपालि नयाँ मेसिन जोडेका छन्। विराटनगरतिरका स्टुडियोले पनि त्यहीँ ल्याउँछन्, अजयको नाताले फोटो धुलाउने काम। आजैमात्र पूर्वका स्टुडियोको २५ हजार रुपैयाँको काम आएछ, काठमाडौंभित्रको काम त जम्मा ७ हजारको भएछ। यो सिजनमा पूर्वबाट मात्र एक लाखको काम आएको उसले हिसाब निकाल्यो।“कसैगरी विराटनगरमा ल्याब खोल्न पा त मालामाल हुने रहेछ” अजयले सोच्यो। ल्याबको हिसाबकिताब उसले हेर्ने भएकाले उसलाई थाह थियो, नयाँ ल्याब खोल्न कम्तिमा १० लाख चाहिन्छ , त्यति उसको हैसियत थिएन, हुन्थ्यो भने ३५०० तलबका लागि उसले कसैकहाँ जागिर खान आवश्यकता थिएन। ३५०० तलबमा ९०० कोठा भाडामा जान्थ्यो, १५०० खाइखुराकमा, ७०० रुपैयाँ गाडी भाडामा छुट्याइएको थियो, बाँकी पढाई खर्च। कहिले पुग्थ्यो, कहिले पुग्दैन थियो। गाउँमा साना भाइबहिनीको पढाईका लागि पनि उसले यहीँबाट खर्च खेप्नु पर्थ्यो। झोराहाटको पुस्तैनी जग्गाले मुश्किलले पुग्थ्यो।सानो झुपडी भन्न लायक जनपथ टोलको आफ्नो घर उसले सम्झयो। जम्मा चार कोठा, एउटा कोठामा बुबाआमा सुत्थे, अर्को कोठालाई भान्छा कोठा बनाइएको थियो। एउटा कोठामा
८० वर्षे हजुरआमा बस्थिन, त्यही कोठामा पुजापाठ गर्ने थलो पनि थियो। चार जना दिदीभाइ एउटै कोठामा सुत्थे। २३ लागेकी दिदी थिइन, कोपिला, १७ वर्षको अजय, १२ वर्षकी बहिनी उषा र ८ वर्षको भाइ दिनेश। दिदीबहिनी एउटा खाटमा सुत्थे, दाजुभाइ अर्को खाटमा। कोपिला कुनै एनजीओमा काम गर्थी /एक दिन राति १२ बजेतिर पिसाबले च्यापेर उठ्दा अजयको ध्यान अचानक दिदीबहिनीको खाटतिर गयो। दिदीको म्याक्सी सोहोरिएर कम्मरतिर पुगेको, उनका सेता तिघ्रा त्यो मन्द उज्यालोमा अत्यन्तै आकर्षक देखिएको। तिघ्राको बीचमा कालो रौंले घेरिएको पुलती बगैंचा। अजयको सामान रिसाएर उठ्यो। ऊ रोमान्चित हुँदै ट्वाइलेट गयो, त्योभन्दा अगाडि कहिले केटीका तिघ्रा नजिकबाट नदेखेको अजयले आज भने स्वर्गै देखेको थियो। पिसाब फेर्न खोज्यो, के आउँथ्यो। हत्केलाले सामानलाई सुम्सुम्याउन थाल्यो, त्योभन्दा अगाडि उसले हस्तमैथुनसमेत गरेको थिएन। साथीहरुले माल खेलाउँदा मजा आउँछ भन्ने सुनेको अजयले त्यसै गर्‍यो।
दिदीका तिघ्रा र पुलती बगैंचा सम्भि्कँदै खेलाउँदै गरेको ३–४ मिनेटका उसको सामानले मनतातो माड फाल्यो।पहिलो चोटी गरेकाले उसको सुपाडाको छाला फर्किएर पोलिरहेको थियो, तर स्खलित हुँदा स्वर्गै पुगेको अनुभव भइरहेको थियो। फर्केर गएर हेर्दा कोपिला कोल्टे फर्किसकेकी, लुगा पनि कसरी हो, मिलाइ छे। उसले राम्रोसँग हेर्नै पाएन। त्यसपछि ऊ हरेक रात उठेर दिदीका आकर्षक फाँचा, तिघ्रा र तिघ्राका कापा हेर्ने गर्थ्यो अनि ट्वाइलेटमा गएर छोल्ने गर्थ्यो। बसपार्कमा पाइने घासलेट साहित्य किनेर पढ्न थाल्यो। मस्तरामका किताबहरु ल्याएर सुटुक्क सिरानीमुनि राखेर पढ्ने उसको बानी भइसकेको थियो। उसकी बहिनी उषाले पनि ती किताबहरु पढ्न थालेकी रहिछ। उसलाई थाहै थिएन।एकदिन दिउँसो आमा र दिदीबहिनी झोराहाट गएको र भाइ स्कूल गएको मौका पारेर अजय सचित्र अश्लिल किताब पढ्दै थियो। उषाआइपुगी। “के पढेको दाइ?” एकाग्र भएर आफ्नो माल सुम्सुम्याउँदै पढिरहेको अजय झसंग भयो।
हत न पत सिरानेमुनि हाल्ने प्रयास गर्दै अतालिदै उसले “केही होइन, केही होइन ” भन्यो। “तैलै के पढ्छ्स मलाई सब थाह छ, पख दिदीलाई भन्दिन्छु” भन्दै उषाले सिरानी पल्टाएर किताब झिकिहाली। दिदी कोपिलाको रिस कडा थियो, भाइबहिनीलाई कुटेर तह लगाएकी थिइ, भनौं उसले अनुशासनमा राखेकी थिई।“उषा दिदीलाई नभन्दे, ला ५० रुपैयाँ दिन्छु” केही उपाय नलागेपछि अजयले आफ्नो पकेटबाट ५० रुपैयाँको नोट झिकेर दिदैं बहिनीलाई फकायो। त्यो समयमा ५० रुपैयाँ ठूलै रकम थियो। उषा मख्ख परी। “ ल भन्दिन ला” उसले किताब फर्काइ, “तर मलाई पनि पढ्न दे है ”। “धेत तँ पढ्छस् र? यो त फोहोरी किताब हो” उसले भन्यो। “अँ, मैले तेरो सिरानीमुनिबाट कतिपटक झिकेर पढिसकेको छु” उस्ले हाँस्दै भनी।“फटाही” अजयले उषाको गाला चिमोट्दै भन्यो, “आइज, मेरो काखमा बस, दुबै जना सँगै पढुँला” उसले उषालाई तान्दै भन्यो। ऊ सजिलैसँग आएर काखमा बसिदिई। उसले पहिलो पाना पल्टायो।
ब्रा विक्रेता आएर सबिता भावीलाई ब्रा बेच्न खोज्दा सबिताले आफ्ना ठूल्ठूला फाँचा समातेर मोलेको दृष्यले उसको उत्तेजना बढयो, उषाको भर्खर उठेका दूधमा च्याप्प समाएर मोल्यो। पहिलो पटक कुनै केटीको दूधमा हात राखेको अजयका लागि यो यो स्वर्गिय आनन्द थियो। उसलाई यस्तो लागिरहेको थियो, मानौं नौनीको थुप्रोमा उसको हात परेको होस्। ती कलिला दूधमा जति हत्केला मोल्दै जान्थ्यो, उसलाई उतिनै मजा आइरहेको थियो। “ऐया दाइ, दुख्यो क्या” योभन्दा अगाडि अश्लिल किताब पढ्दा उत्तेजनामा आएर आफ्ना दूध आफैले सहल्याउँदै आएकी उषाले साँच्चीकै पीडा भएर भनी, किनभने अजय उसको दूध कठोरतापूर्वक मोलिरहेको थियो।“नकरा जाँठी, दुख्छ? हेर्त त्यहाँ कति मजाले मोलिरहेको छ” उसले चित्र देखाउँदै भन्यो। “विस्तारो मोलन है, मेरो प्यारो दाइ” उषाले फकाउने स्वरमा भनी। ऊ किताबका पाना पल्टाउँदै थिई। हरेक
पानामा सम्भोगका सचित्र वर्णनले उत्तेजित भएको अजयले पछाडिबाट आफ्नो सामान सीधा बनायो र उषालाई एक पटक जुरक्क उठाएर काखमा मिलाएर राख्यो।आफ्नो चाकमुनि लठ्ठीजस्तो सामानको अनुभवले एक पटक त उषा झसंग भइ, “ के हो दाइ, पछाडि” उसले फर्कने प्रयास गरी। अश्लिल हिन्दी किताबमा सम्भोगका वर्णन पढे पनि केटाहरुको सामानबारे उसलाई पूरा ज्ञान नै थिएन। पहिलोपटक आफ्नो चाकमुनि दबिएको लाँडो उसका लागि नौलो अनुभव थियो।“केही होइन, मेरो हात, तँ पढ्न किताब” अजयले मुनिबाट बिस्तारै बिस्तारै दल्दै भन्यो। एक छिनपछि ऊ स्खलित भयो “आज त पूरा मजा आयो, मेरी प्यारी उषा” उसले उषाको गालामा प्वाक्क म्वाई खायो। “अर्को दिन पनि गर्न दे ल, म तलाई पैसा दिन्छु नि, जा अहिले” उषालाई पठाएर आफ्नो लाँडो सफा गर्ने उद्देश्यले उसले भन्यो। ५० रुपैयाँ पाएकी उषा पनि फुरुंग हुँदै फिल्म हेर्न गई। त्यो दिन उषाको चाकमा दलेर चित्त बुझाएको अजय, फेरि उषालाई एक्लै पारेर राम्रोसँग सुताउने दाउमा लागिरह्यो, तर लामो समयसम्म त्यो संयोग जुरेन।
विर्तामोडमा मामाघर थियो, एक दिन मामा विराटनगर आएका बेला अजयका बुवाले उसलाई एसएलसी पासपछि पढाईसँगै जागिर लगाउने कुरा झिके, मामा वारपारका व्यापार गर्थे। सिलगुडीबाट इन्डियन सामान ल्याउँथ्ये, काठमाडौंका व्यापारीलाई बेच्थे। काठमाडौंबाट चाइनिज कपडाहरु, इलेक्ट्रीक सामान लान्थे र पारी तस्करी गर्थे। विशालबजारका व्यापारीहरुसँग उनको राम्रो चिनजान थियो। उनैले अजयलाई काठमाडौं ल्याएका थिए, उनकै सिफारिसमा अजयले कलर ल्याबमा जागिर पाएको थियो।सुरुमा ल्याबका सहयोगीका रुपमा काम गरिरहेको अजयले त्यहीँ काम गर्दागर्दै आईकम पास गर्‍यो। ऊ तिक्ष्ण भएकाले काम तुरुन्तै बुझ्थ्यो, ल्याबको हिसाबकिताब चौपट थियो। उसले आफ्नो पढाइसँगै प्रयोगका रुपमा कलर ल्याबमा लेखा प्रणाली विकास गर्‍यो, नतिजा ६ महिनामै देखियो। कति आम्दानी हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, त्यसमध्ये कति नाफा छ वा
घाटा छ भन्ने कुनै यथार्थ हिसाब किताब नभएका मानलालले लेखा राख्न थालेपछि आफ्नो आम्दानी ह्वात्तै बढेको अनुभव गरे। यसै क्रममा अजयले उनको पुरानो बहिखाता खोजी गरेर साहू र लिनुपर्ने हिसाब पनि सही ढंगले निकाली दियो। अजय, मदनकृष्ण, आफू र आफ्ना परिवारको परिचालन गरेर मानलालले एकै वर्षमा ८ लाखको उधारो असुले र त्यही पैसामा थपथाप गरेर ल्याबमा नयाँ मेसिन थपे।अहिले अजय मानलालको विश्वासपात्र भइसकेको छ, ऊ अहिले कलरल्याबको एकाउन्टेन्टमात्र नभएर बूढाको कारोबारको दाहिने हात पनि हो। अरुसँग फोटो धुलाएकोमा मोहरदामसमेत नछाड्ने बूढा दुई चार सयका लागि बूढाले अजयसँग कुनै हिसाब किताब खोज्दैनन। त्यही भएर उसले विश्वासका साथ बूढासँग भरै मागौंला भनेको थियो।